IPods manavao ny lokony | Avy amin'ny mac aho
Ny iPods dia havaozina miaraka amin'ny loko manga mainty, mavokely mafana ary volamena
Tamin'ny fahatongavan'ilay iTunes 12.2 vaovao dia nisy banga nosokafana tao amin'ny tsiambaratelon'i Apple ary nanambara tsy nahy izy ireo fa ny iPod range havaozina tsy ho ela izy miaraka amin'ny loko vaovao. Araka ny hita ao amin'ny fisie anatiny an'ny iTunes 12.2 vaovao Misy sarin'ireo sary masina mampiseho fa misy loko vaovao telo, manga mainty, mavokely lalina ary volamena.
Raha mijery ireo fivarotana an-tserasera tsy misy isika dia mbola afaka mahita an'io fanovana io ka antenaina fa tsy ho ela dia hanapa-kevitra ny handefa ireo iPods vaovao ireo i Apple. Ireo loko telo resahintsika dia hampiharina amin'ny andiany iPod telo misy ankehitriny, ny shuffle, ny nano ary ny mikasika.
Vao tsy ela akory izay dia niresaka momba ny fiainana azo avela ho an'ny iPod's range Apple isika ary izany dia isan-taona ny iPhone sy iPod no mandefa ireo izay tamin'izany fotoana izany ho an'ny orinasa paoma hiakatra ambony, ny iPod Classic. Ankehitriny, amin'ny alàlan'ny iTunes 12.2, dia fantatsika fa manomana loko vaovao telo ho an'ny faritry iPod i Apple. Ireo loko telo ireo dia ny manga mainty, mavokely mafana ary volamena. Vokatra vaovao amin'ny volamena izay tsy mampiseho zavatra hafa tadiavinao ampidiro amin'ny tsena sinoa ihany koa.
Na izany aza, raha mijery tsara ny sary lohatenin'ity lahatsoratra ity isika dia ho tsapanao izany nanjavona ilay fantsona izay nampidirina tamina iPod touch tamin'ny taranaka fahadimy niaraka tamin'ny fakantsary toy ny amin'ilay kinova tsy misy fakantsary namboarina tamin'io ary tsy naharitra ela teny an-tsena.
Etsy ankilany, hitantsika fa ny volamena rehetra amin'ny sary dia kely noho ny an'ny iPhone, iPad ary MacBook ankehitriny, noho izany dia mety ho nieritreritra ny hanambatra loko volamena vaovao i Apple amin'ny ho avy. Ho hitantsika raha amin'ny Keynote manaraka amin'ny volana septambra izay hamoahana ireo vaovao ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny iPods dia havaozina miaraka amin'ny loko manga mainty, mavokely mafana ary volamena
Apple dia manivana ireo hira amin'ny fiteny mazava ao amin'ny radio Beats 1
Ahoana ny fomba hihoarana ny fanavaozana mandeha ho azy ny Apple Music